Best SPA5 fracturing Pile Breaker yoMvelisi kunye Factory | SINOVO
SPA5 fracturing imfumba full
Ukucaciswa (iqela leemodyuli ezili-12)
Uluhlu lwePile (mm) I-950-Ф1050
Uxinzelelo oluphezulu lokuqhuba intonga 320kN
Ubuninzi ngesibetho isilinda hydraulic 150mm
Ubuninzi xi isilinda hydraulic 34.3MPa
Ukuhamba okuphezulu kwesilinda enye 25L / min
Sika inani lemfumba / 8h 60pcs
Ukuphakama ukusika imfumba ixesha ngalinye ≦ 300mm
Ukuxhasa umatshini wokumba iTonnage (excavator) ≧ 20t
Ubunzima bemodyuli enye 110kg
Ubungakanani bemodyuli enye 604 x 594 x 286mm
Ubungakanani benqanaba lomsebenzi 2222x 2500
Iyonke ubunzima beqhekeza 1.5t
Iiparameter zoKwakha ze-SPA5
Amanani emodyuli Uluhlu lobubanzi (mm) Ubunzima beplatform (t) Iyonke ubunzima beqhekeza (kg) Ukuphakama kwemfumba enye yokutyumza (mm)
Ukuqhekeka kwe-hydraulic pile inezi zinto zilandelayo: ukusebenza ngokulula, ukusebenza kakuhle, iindleko eziphantsi, ingxolo encinci, ukhuseleko kunye nozinzo ngakumbi. Ayinyanzeli mandla emzimbeni womzali kwaye ayinampembelelo kubunzima bequmba kwaye ayinampembelelo kubungakanani beepayili, kwaye inciphisa ixesha lokwakha kakhulu. Iyasebenza kwimisebenzi yeqela elixineneyo kwaye icetyiswa ngamandla lisebe lezokwakha kunye nesebe lokongamela.
1.Umeko-bume yendalo esingqongileyo: Ukuqhuba kwayo kubunzulu bomsindo kubangela ingxolo encinci ngexesha lokusebenza kwaye akukho mpembelelo kwimimandla engqongileyo.
Ixabiso eliphantsi: Inkqubo yokusebenza ilula kwaye ilula. Bambalwa abasebenzi abasebenzayo kufuneka bonge iindleko zomsebenzi kunye noomatshini bokugcina ngexesha lokwakha.
3. Umthamo omncinci: Kukukhanya kwezothutho ezifanelekileyo.
4. Ukhuseleko: Umsebenzi wokunxibelelana ngaphandle kokusebenza unokwenziwa kwaye unokusetyenziselwa ukwakhiwa kwifom yomhlaba.
Ipropathi ye-5. Kubhetyebhetye ukudibanisa oomatshini bokwakha abaninzi kunye nokusebenza kwendalo kunye noqoqosho. Iiteleskopu bokuphakamisa amatyathanga ukuhlangabezana neemfuno zeefom zomhlaba.
Ubomi benkonzo ende: Yenziwe ngezinto zasemkhosini ngababoneleli abakumgangatho wokuqala abanomgangatho othembekileyo, ukwandisa ubomi bayo benkonzo.
7.Convenience: yinto encinci yezothutho elula. Ukudityaniswa kwemodyuli eguqukayo kunye nokutshintsha kuyenza ukuba isebenze kwiimfumba ezinobubanzi obahlukeneyo. Iimodyuli zinokudityaniswa zidilizwe ngokulula nangokufanelekileyo.
1. Ngokobubanzi be mfumba, ngokubhekisele kwiiparameter zokwakha ezihambelana nenani leemodyuli, qhagamshela ngokuthe ngqo ii-breakers kwiqonga lomsebenzi ngesixhobo sokutshintsha ngokukhawuleza;
2. Iqonga elisebenzayo linokuba yi-excavator, isixhobo sokuphakamisa kunye nokudityaniswa kwesikhululo sempompo ye-hydraulic, isixhobo sokuphakamisa sinokuba yinqwelo yeloli, iikhreyithi zokurhubuluza, njl.
3. Hambisa isigqubuthelo semfumba siye kwicandelo lentloko elisebenzayo;
4. Lungisa iphuli yomfumba kumphakamo ofanelekileyo (nceda ujonge kuluhlu lweparameter yokwakha xa utyumza imfumba, kungenjalo ikhonkco linokwaphuka), kwaye ubambe indawo yemfumba eza kunqunyulwa;
5. Lungisa uxinzelelo lwenkqubo ye-excavator ngokwamandla ekhonkrithi, kwaye ucinezele isilinda ide ingqokelela yekhonkrithi iphule phantsi koxinzelelo oluphezulu;
6. Emva kokuba inqwaba ityunyuziwe, yiphakamise ibhloko lekhonkrithi;
7. Hambisa imfumba etyumkileyo kwindawo ebekiweyo.
Egqithileyo I-TR500C yeRotary Drilling Rig
Okulandelayo: I-TR60 Rotary Drilling Rig
Ngesanti kubunzulu baphantsi eziphathekayo
Ujingi Break Breaker